Baaris: Yaa ka dambeeyey dilki ugu badnaa ee askarta Somalia ee sanadii 1978 - Caasimada Online
Home Warar Baaris: Yaa ka dambeeyey dilki ugu badnaa ee askarta Somalia ee sanadii...
Baaris: Yaa ka dambeeyey dilki ugu badnaa ee askarta Somalia ee sanadii 1978
Muqdisho (Caasimada Online) – Horraantii sannadkii 1978-kii ciidamada Soomaaliya ayaa waxay gudaha ugu jireen weerarkooda ay horey ugu sii socdeen Itoobiya, oo markaas dagaal uu kala dhaxeeyey Soomaaliya.
Dhinaca kale adawladda Itoobiya oo ay taageerayaan xulafadii Ruushka, Cuba, Yemen iyo waddamo kale waxay weerarro ku qaadayeen fadhiisimada safka hore ay ku leeyihiin ciidamada Soomaaliya.
Ciidamada cirka ee Itoobiya ayaa duqeeyey saldhig ku yaalla meel ku dhow Jigjiga, iyagoo waxyeello culus gaarsiiyay ciidankii iyo taangiyo ay Soomaaliya lahayd.
Intii uu dagaalkan socday waxa dhacay fal ay saraakiisha sare ee ciidamada dawladda Soomaaliya ku khaarajiyeen askartii ugu badnayd ee Soomaali ah ee hal mar lagu laayo goob keliya.
Haddaba sideed ayuu ku dhacay dilkaas. Yaa ka dambeeyey? Maxaa askarta loo dilay baaritaan arrintaas ku saabsan waxaa lagu fallanqeeyey barnaamijka Galka Baarista ee idaacadda VOA, oo uu soo jeediyo Haaruun Macruuf.